ပြောင်းလဲမှုတွေများစွာမှာ အဓိကအနေနဲ့ ဘာက ပါ၀င်နေပါလဲ ??? | Mizzima Myanmar News and Insight /* TA: Added on nov-22-2019 */
ပြောင်းလဲမှုတွေများစွာမှာ အဓိကအနေနဲ့ ဘာက ပါ၀င်နေပါလဲ ???
ပြောင်းလဲဆန်းသစ်နေတဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲကိုအမှီလိုက်နိုင်ဖို့အတွက်တော့ အရေးကြီးလာပါပြီနော် …
အဲ့တော့ ပြောင်းလဲမှုတွေများစွာထဲမှာမှ ဘယ်လိုအရာတွေကများပြောင်းလဲမှုတွေ များစွာတွေ့ရမလဲ ???
ပြောင်းလဲမှုတွေ များစွာတွေ့လာရတာကတော့ အများကြီးပဲပေါ့နော် .. ဘာတွေများလဲပေါ့ .. ယနေ့မျက်မှောက်ခေတ်မှာအင်တာနက်လေးဖွင့်လိုက်တာကိုပြောင်းလဲလာတာတွေကိုတွေ့ရမှာပါ .. ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် အခုခေတ်မှာဆိုမိန်းကလေးအများစုဟာအရမ်းကိုလှလာကြတယ် . ဘာကြောင့်လဲ .. သူတို့တွေ အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် အလှပြင်တာတွေ ကြည့်မယ် .. Cosmetics တွေကို Online ကနေ အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်မယ် ..တစ်ခြား Blogger များစွာရဲ့ အလှအပမျိုးစုံကိုလိုက်ကြည့်နိုင်ကြတယ်လေ .. ပြီးတော့ အိမ်မှာရှိတဲ့ မေမေတွေဆိုလည်းအရင်ကလို အိမ်မှာပဲနေပြီးပျင်းနေစရာ မရှိတော့ဘူး .. မေမေတွေအတွက်ဆိုလည်းတရားဓမ္မတွေ၊ ဟင်းချက်တဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ တစ်ခြားဗဟုသုတတွေ များစွာရရှိနိုင်တဲ့ အရာတွေကိုလည်းများစွာကြည့်ရှုနိုင်လာပါပြီ။ ဒါတွေ ယနေ့မျက်မှောက်ခေတ်ရဲ့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ အရာတွေပါပဲ .. အဲ့တော့ မျိုးစုံသောပြောင်းလဲမှုတွေမှာအဓိကအနေနဲ့ ဘာက ပါဝင်နေပါလဲ ???
ကျွန်မအမြင်နဲ့ပြောရရင်တော့ လူတိုင်းကိုင်ဆောင်ထားတတ်တဲ့ smartphone တွေပဲပေါ့နော် .. Smartphone တွေများစွာထဲမှလည်း ဒီဇိုင်းမျိုးစုံကာလမျိုးစုံ brand များစွာထွက်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာမှ ကိုယ်ကဘယ်လိုဟာကိုအဓိကထားပြီး ဝယ်ချင်လဲစဉ်းစားရမှာပေါ့နော် …ဖုန်းဆိုရင် အဓိကကကိုယ်ကအဓိကဘာလုပ်မှာလဲစဉ်းစားရမှာပေါ့ ..အဲ့တော့ အဓိကလုပ်ချင်တာကအင်တာနက်သုံးမယ် .. ကိုယ့်အတွက် လိုအပ်တာတွေ အသုံးချတတ်ဖို့အတွက် အင်တာနက်ဆိုတာကိုတစ်နေ့မကြည့်ရင်ကိုမနေနိုင်ကြဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါဆိုရင်တော့ ဖုန်းဝယ်ရင် ကိုယ့်အတွက်တော့ Screen ကြီးကြီးနဲ့ ကြည့်လို့ရတဲ့ ဖုန်းမျိုးကို ဝယ်ယူရမှာပေါ့ ..ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ အင်တာနက်ရှိရုံနဲ့ကိုမျက်မှောက်ခေတ်မှာကိုယ်လိုချင်တာတွေကိုရှာဖွေနိုင်ပြီးဆက်သွယ်မှုတွေ ရရှိလာကြတာပေါ့ ..
Screen သေးတဲ့ ဖုန်းတွေကြောင့် ဘာကိုပဲ ကြည့်ကြည့် စိတ်ညစ်နေရမှာပေါ့ ..အဲ့ဒါတွေအတွက် စိတ်ညစ်မှုတွေ မဖြစ်ရအောင် HUAWEI nova 2i ဖုန်းကFull View ပါတဲ့ HUAWEI nova 2i နဲ့သုံးဖို့အတွက် အဆင်ပြေနိုင်ပါပြီ။ အင်တာနက်ပေါ်မှာစာတွေဖတ်မလား ၊ ဂိမ်းတွေဆော့မလား၊ ရုပ်ရှင်တွေ ၊ သီချင်းတွေ ကြည့်မလား၊ အရာအားလုံးကိုအဆင်ပြေပြေအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် HUAWEI nova 2i ဖုန်းကမျက်နှာပြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ ထွက်ရှိလာပြီပေါ့နော် .. HUAWEI nova 2i မျက်နှာပြင်အကျုယ်ဟာထောင့်ဖြတ်အနေအထားအတိုင်းတိုင်းမယ်ဆိုရင်၅.၉လက်မရှိပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ဖုန်းများများကြည့်သူတိုင်းအတွက်တော့ အမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ ကြည့်နိုင်မယ့် ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ အမြင့်မှာလည်း 156.2 mm ရှိပြီးအထူကတော့ 7.5mm ရှိပြီးပါးလွှာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ မျက်နှာပြင် ကျယ်တဲ့အပြင် အလင်းရောင်ကိုချိန်ညှိပေးနိုင်တဲ့ Eye Comfort လည်းပါတော့သင့်မျက်လုံးအတွက်လည်းစိတ်ချရတာပေါ့နော်။ နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာကတော့ HUAWEI nova 2i ဖုန်းဟာ Application နှစ်ခုလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းသုံးလို့ရတဲ့ Split-Screen ကြောင့်တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေဆုံးရှုံးစရာမလိုတော့ဘူးလေ။အဲ့တော့ ကိုယ်ကရုပ်ရှင်ကြည့်နေရင်းနဲ့လည်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ messenger မှာစကားပြောမလား၊ ခရီးသွားဖို့လိုအပ်ရင် ဟိုတယ်တည်နေရာကို ကြည့်ရင်းတစ်ခါတည်းဘိုကင်တင်ဖို့ ဖုန်းပြောမလား။ အရာရာတိုင်းအတွက်တော့ အိုကေပဲလေ။ ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့အချိန်တွေကိုတစ်ခါကြည့်ပြီးနှစ်မျိုးလုပ်လို့ရတဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေပေါ့နေ်ာ။ ပြီးတော့ HUAWEI nova 2i ရဲ့ ဖုန်းဟာလည်းအလယ်အလတ် အတန်အသင့်ရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက် လူတိုင်းကိုင်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။
အဲ့တော့ ပေါ့ပါးပြီးသယ်ရလွယ်ကူမျက်နှာပြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ ဖုန်းကိုကိုင်ဆောင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ HUAWEI nova 2i ကိုပဲ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်နော် ………